Madaxweynaha dowladda Puntland oo Muqdisho gaarey. – Radio Daljir
Madaxweynaha dowladda Puntland oo Muqdisho gaarey.
Seteembar 5, 2016 12:28 g 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta 05 September, 2016 waxay safar shaqo ugu anba bexeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya.
Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Aadan Cadde Airport ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey wafdiga Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana soo dhoweyntaasi ka qayb galay madax kala duwan oo ka tirsan Golayaasha Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdigiisa ayaa ka qayb geli doona shirka Madasha Wada Tashiga Qaran oo ka furmi doona magaalada Muqdisho maalinta berri ah ee foodda inagu soo haysa, waxaana uu shirkaasi daba socdaa kulamadii hore ee ay madashu ku yeelatay Muqdisho, kuwaas oo looga arrinsanayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2016.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo ayaa Muqdisho ku sugnaan doona maalmaha soo socda, wuxuuna Madaxweynuhu shirka Madasha ka jeedin doonaa khudbad muhiim ah oo tilmaamaysa sida ay markasta Dawladda Puntland iyo shacabkeedu ugu diyaarsan yihiin dib u dhiska dalkeena Soomaaliya.
Diyaaradihii qaadka keeni jirey Soomaaliya oo si kumeel gaar ah loo hakiyey.